Claudio Ranieri oo hal arin u sheegay Maurizio Sarri, kahor inta uusan ku biirin kooxda Chelsea – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Manchester City iyo Burnley ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Brighton iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Manchester United oo qandaraas cusub ku abaal-marineysa mid ka mid ah xiddigaheeda
Chelsea oo dharbaaxa xoogan la damacsan kooxda Real Madrid
Horudhac: Real Madrid vs Deportivo Alaves… (Los Blancos oo doonaysa inay dib ugu soo laabato waddada guulaha ee horyaalka La Liga)
Claudio Ranieri oo hal arin u sheegay Maurizio Sarri, kahor inta uusan ku biirin kooxda Chelsea
Dajiye May 27, 2018
(England) 27 Maajo 2018. Claudio Ranieri ayaa aaminsan in Maurizio Sari laga yaabo inuu ku guuleysto Chelsea, lakiin waxa uu ka digay inuusan arki doonin wax yar ama lagayaabee inuusan arkin” milkiilaha kooxda Roman Abramovich.
Macalinkii hore kooxda Napoli ayaa lala xiriirinayaa inuu heshiis qalanka ugu duugi doono kooxda reer London ee Chelsea, si uu u noqdo badalka Antonio Conte .
Laakiin macalinkii hore kooxda Leicester City ayaa u sheegay shabakada Sky Italy: “Waxaan jeclaan lahaa inaan u hambalyeeyo Aurelio De Laurentiis, sababtoo ah wuxuu keenay tababaraha ugu fiican ee Talyaaniga, kaasoo koobab badan ku guuleystay”.
“Wax walba waxay ku xiran yihiin waxa uu doonayo Maurizio Sarri, wuxuu arki doonaa wax yar, ama laga yaabee inuusan arkin madaxweynaha kooxda kooxda Roman Abramovich, waa inuu si adag u shaqeeyaa, taasi malan wax ay u dhimi doonto”.
“Hadda si wanaagsan ayay u garanayaan isaga kooxaha Yurub oo dhan waana hubaa inuu falsafadiisa meel walba ku soo rogi karo”.
Messi oo Furka tuurtay kaddib markii ay Real Madrid xalay ku guuleysatay CL markii 3-aad oo xiriir ah isagoona Barcelona ku Amray inay....
Héctor Bellerín oo eeganaya xaalada dhaawac Dani Carvajal, si uu firsad ugu helo ka qeyb-galkiisa koobka aduunka ee 2018